कसले सम्हाल्लान् अब अफगान सरकार ? हिबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह गनी बराद को हुन् ? - Samriddha Online
कसले सम्हाल्लान् अब अफगान सरकार ? हिबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह गनी बराद को हुन् ?
समृद्ध अनलाईन ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ११:१३ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) ३१६१४ पाठक संख्या
काठमाण्डौं, साउन ३२ गते । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनीको बहिर्गमनसँगै तालिबानले राष्ट्रपति भवन समेत कब्जा गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन कव्जा गरेपश्चात् अब उनीहरूका कुन कुन नेताले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्छन भन्ने प्रश्नहरू सर्वत्र उठिरहेका छन् ।
अफगानी युद्ध समाप्तिको् घोषण तालिबानले गरे संगै सत्ता सञ्चालनको लागि अहिले दुई नेताहरुको नाम चर्चामा आएको छ । हिबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर कसले सत्ता सम्हाल्छन् भन्ने सवैको चासोको विषय बनिरहेको छ ।
तस्विरः मुल्लाह गनी बरादर
मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर ती चारजनामध्येका एक हुन् जसले सन् १९९४ मा तालिबानको गठन गरेका थिए । सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइदिएपश्चात् उनी विदेशी सैन्य फौजविरुद्धको विद्रोहका एक प्रमुख नाइके बनेका थिए । सन् २०१० मा अमेरिका र पाकिस्तानको संयुक्त कारबाहीका बेला उनलाई कराची सहरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
सन् २०१२ सम्म उनलाई गायव नै बनाउर राखिएको थियो । उनका बारे धेरै जानकारी उपलब्ध थिएन । त्यतिखेर अफगानिस्तान सरकारले शान्ति वार्ताको कुरा गर्दा पहिले आफ्ना बन्दी मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै तालिबानले दिने गरेको सूचीमा उनको नाम प्रमुख रूपमा हुने गर्थ्यो ।
सन् २०१३ मा पाकिस्तानी सरकारले उनलाई रिहा ग¥यो । उनी तालिबानका पूर्व प्रमुख नेता मुल्लाह ओमारद्वारा सबभन्दा भरोसा गरिएका र उनका निकट सहयोगी थिए । पक्राउ पर्दा उनी तालिबानका दोस्रो सबभन्दा ठूला नेताका रुपमा थिए । सन् २०१८ मा कतारमा अमेरिकासँग कुराकानी गर्न तालिबानको कार्यालय खुल्दा त्यहाँ तालिबानको राजनीतिक प्रमुखका रूपमा उनलाई खटाइयो । उनले सधैँ अमेरिकासँगको वार्ताको समर्थन गरिरहे ।
इन्टरपोलका अनुसार मुल्लाह बरादरको जन्म उरुजगान प्रान्तमा सन् १९६८ मा भएको थियो । उनी दुर्रानी समुदायका भएका ठानिन्छ ।
तस्विरः हिबतुल्लाह अखुन्दजादा
हिबातुल्लाह अखुन्दजादा अफगान तालिबानका प्रमुख नेता हुन् । उनी इस्लाम धर्मका विद्वान हुन् जो कान्दहारबाट आएका हुन् । उनले नै तालिबानको दिशा बदलेर अहिलेको अवस्थामा ल्याइपु¥याएको ठानिन्छ ।
तालिबानको गढ रहेको कान्दहारसँग जोडिएका कारण उनले तालिबान नेतृत्वमा आफ्नो पकड बनाउन सकेको ठानिन्छ । सन् १९८० को दशकमा उनले तत्कालीन सोभियत सङ्घको विरुद्ध अफगानिस्तानमा विद्रोहका एक कमाण्डरको भूमिका खेलेका थिए । तर उनको पहिचान एक सैन्य कमाण्डरको रूपमा भन्दा पनि एक धार्मिक विद्वानको रूपमा ज्यादा भएको पाइन्छ ।
अफगान तालिबानका प्रमुख नियुक्त हुनुभन्दा पहिले पनि उनी तालिबानका शीर्ष नेताहरूमध्ये रहेका थिए। धर्मसँग जोडिएका आदेशहरू उनै दिन्थे । उनले दोषी पाइएका हत्यारा वा अवैध यौन सम्बन्ध राख्नेहरूलाई हत्याको सजाय तथा चोरी गर्नेहरूलाई हात काट्ने सजायका आदेश दिएका थिए ।
हिबतुल्लाह तालिबानका पूर्व प्रमुख मोहम्मद मन्सुरका उपप्रमुख पनि थिए । सन् २०१६ को मे महिनामा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मन्सुरको मृत्यु भएको थियो । मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबतुल्लाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए ।
करिब ६० वर्षका हिबतुल्लाहले जीवनको धेरै समय अफगानिस्तानमै बिताएका छन् । हिबतुल्लाहको नामको अर्थ हुन्छः “अल्लाहको तर्फबाट प्राप्त उपहार“। उनी नुरजाई समुदायबाट आएका हुन् ।